IFTIINKACUSUB.COM: KHATARTA SHIRKIGA.
Ilahay oo SW loo shiriik yeelaa ,waa khadarta ugu wayn oo qofka muslimka ah If iyo Aakhiraba.Waana camalka ugu danbiga badan ee uu Ilahay aanu marnaba dhaafin.Sidaa awadeed waxa ila fiican in laga taxadaro,iyada oo la baranaayo sida uu ku yimaado.
Waxaa laga weriyey Anas (Allaha ka raalli noqdee) in uu yiri: Waxaan maqlay Rasuulkii llaahay (s.c.w.) oo leh: Wuxuu yiri llaahay: Ina Aadamow intaad ii yeeraysid oo aad iga rajo qabtid waan kuu dhaafayaa wixii dembiyo kaa dhaca, anigoon u dan gelin badnaantooda iyo xumaantooda.
Ina Aadamow haddii dembiyadaadu cirka taabtaan, kaddibna aad i weydiisato dembi-dhaaf waan kuu dembi dhaafayaa. Ina Aadamow haddii aad iila timaaddid dhulka muggiis oo dembiyo ah; kuna dhimatid adigoon ii shariik yeelin cibaadada, hoggaansanka, iyo maqalka cid kale ila wadaajin, waxaan ku siinayaa dhulka muggi oo dembi dhaaf ah.
" Waxaa weriyey at-Tirmidi oo yiri waa Xadiis Xasan oo saxiix ah.
Xadiiskani wuxuu inoo caddeynayaa khatarta iyo halisnimada shirkiga iyo sida llaahay ugu geesi gelinayo dadka in ay ka soo noqdaan gafafkooda ugana towbad keenaan. Dembiga waxaa loola jeedaa ku xad-gudubka qodob ama qodobbo ka mid ah Sharciga Islaamka.
Asalka dembi kastana kama baxsana saddex nooc:
1) Ku xad-gudub wax llaahay xaaraantinimeeyey in la falo sida ku xadgudubka xuquuqda dadka, xoolahooda iyo sharafkooda ama ku xadgudubka xuquuqda llaahay sida inaad cid wax la wadaajisid isagoo keli ahaan u yeeshay abuurka iyo maamulka kownka, ahna midka qura ee xaq u leh in la raaco, loo hoggaansamo ee wuxuu amray lagu fartoomo, wixii uu reebayna laga reebtoomo.
2. Gudasho la'aanta waajibaadka llaahay faray sida salaadda, sekada, soonka, xajka, dhowritaanka xuquuqda waalidiinta, inay dumarka xidhaan maryo oogadooda wada astura oo ay ka xijaabtaan gayaankooda, inay is dhex gelin, isku dhafnaan sida xoolahii, ragga iyo dumarka is gaya ee aan guur xalaal ah ka dhaxeyn iyo arrimaha kale ee Rabbi ama rasuulkiisiina fareen ee laga heli karo qur'aanka kariimka ama sunnada rasuulka (SCW).
3) U gudashada waajibaadka si aan sharcigu farin, sida bidcada oo ah in lagu daro sharciga wax aan llaahay iyo Rasuulkiisu midna jideyn. Haddii si kale loo fiiriyo cidda xuquuqda lagu xadgudbayo iska leh, waxaad arkaysaa in ay gaar yihiin xuquuq llaahay sida cibaadada, qaarna ay aadamigu iska leeyihiin, marka dembiga lagu sheegay Xadiiskan ee llaahay dhaafayo marka laga toobad-keeno waa kuwa llaahy laakiin xuquuqda aadamiga waa in qofku gudo marka uu toobad keeno.
Xadiisku wuxuu caddeeyey qofkii ku dhinta dembiyo aanu ka toobad-keenin, ha yeeshee markaa u dhimanayey llaahay u hoggaansanaa, ku mideynayey maqalka iyo adeecidda, kitaabkuu soo dejiyey iyo nebiguu soo diray dhab u raacsanaa, shirki nooc iyo waji u yeeshaba ka fogaa in llaahay qofkaa shirkiga ka marnaa wixii dunuub kale ka dhacay dhaafi doono, ama ka goyn doono.
Hafkaana waxaa ka muuqda in qofkii ku dhinta shirki inaan llaahay u dhaafayn dembigiisa ee la marin doono ciqaabta uu mudan yahay, laguna waarinayo, maxaa yeelay, wuxuu Nebigu Xadiis kale ku sheegay in dembiga Aadamigu galo shirkigu ugu weyn yahay.
Aayad Qur'aan ah oo ku jirta Suuradda an-Nisaa, aayaddeeda 116aad, waxaa lagu sheegay in Ilaahay qofkuu doono u u dembi dhaafi doono, laakiin, ninkii llaahay cibaadada oo noocyo iyo wajiyo badan cid kale la wadaajiya aanu u dembi dhaafi doonin. Marka si looga digtoonaado dembigaa qofka gafsiinaya dembi-dhaaf ka Alla waa in la barto waxa u u yahay si aan loogu dagmin.
Shirkigu asal ahaan waa wadaajin sida loo wadaago caanaha, cuntada iyo xoolaha, shirkigana waxaa loola jeedaa in xaqa llaahay gaarka u ah lala wadaajiyo cid khalqigiisa ah. Waxaa waajib ku ah dadka in ay Alle keligi caabudaan.
Tusaale ahaan, haddaad salaadda u tukato in lagugu ammaano ama aad sadaqada u bixisid in lagugu faaniyo, ama wax ilaahay laga baryo ood cid kale la baridid ood tiraahdid llaahay iyo Hebelow arsaaq i siiya ama ilmo i siiya ama darajo isiiya i.w.m., Marna ma bannaana in llaahay cid kale lagu la dhaho, maxaa yeelay, ma Jirto cid kale oo wax la wadaagta.
Nebiguna (s.c.w.), isagoo dadka uga digaya sida shirkigu ugu dhuunto camalka, ayuu yiri shirkigu waa ka dhuuman og yahay Qur'aansho madow oo habeen gudcur ah ku ko socota dhagax sallax ah oo siman, marka Qur'aanshada sidaas ah, shanqarna aan lahayn laga maqli karo, sidaas oo kale ayuu shirkigu ugu dhuuman karaa camalka qof ka.
Haddaba taasi waa in ay ku xambaarto qof ka muslimka dhabta ah digtoonaan iyo feejignaan, si uu uga badbaadiyo cibaadadiisa in shirki soo galo ama ku dheehmo, marka qof kasta isagaa ka mas'uul ah siduu shirkiga isaga ilaalin lahaa.
1. Wuxuu xadiiskani faa'ideynayaa in qof kii ku dhinta dembi aan shirki ku jirin llaahay u naxariisan doono, xataa haddii lagu ciqaabo dembiyada qaarkood, inuu janno ku dambeyn doono sida ay sheegeen xadiisyo kale.
2. Ninkii ku dhinta dembi shirki ku jiro isagu llaahay ka sugi maayo naxariis sida lagu sheegay Aayad Qur'aan ah oo ku jirta Suuradda Al-Baqara, oo micnaheedu yahay ninkii llaahay u shiriig yeela ama xaq llaahay cid kale ku ladha in jannada laga xaaraantinimeeyey, hoygiisuna nogon doono naarta, oo meel hoog ah. llaahay ha innaga badbaadiy